သိန္း 1000 ႏွင့္အထက္ ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်တိုက်ခန်းများ
မြောက်ဒဂုံ ၃၄ရပ်ကွက် တိုက်ခန်းအရောင်း
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8852512 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8831068 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
#OH00815 မင်္ဂလာပါရှင့် သိန်း 1700 ညှိနှိုင်းဈေးလေးနဲ့ (36) ရပ်ကွက် ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းမကျောကပ် ထောင့်ကွက်ရှိ သုံးထပ်တိုက် အရောင်းလေးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရပါစေရှင့်...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8828118 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
#OH00816 မင်္ဂလာပါရှင့် သိန်း 1650 ညှိနှိုင်းစျေးလေးနဲ့ (36) ရပ်ကွက် တပင်ရွှေထီးလမ်းမအနီးနှင့်ဗန္ဓုလလမ်းမအနီးရှိ နှစ်ထပ်တိုက် အရောင်းလေးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရပါစေရ...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8828105 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
မြောက် ဒဂုံ31ရပ်ကွက်ဘုရင့်နောင်ပင်လုံစစ်တောင်းလမ်းမအနီး23x60. 2RCအပေါ်singelroom2. အောက်ထပ်singelroom2ဂရမ်အမည်ပေါက်နေရာကောင်းအမြန်ရောင်းမည်သိန်း1500အရှော့တင်း...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8796486 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
မြောက်ဒဂုံ37ရပ်ကွက်ပင်လုံဒဲ့ပေါက်လမ်ကျယ်ပေါ်20x60. 3ထပ်RCပါကေးခင်းmasterBedrooms(5)ခန်းဘဏ်ချိတ်ရလူမနေရသေးတိုက်သစ်ph09699261984. 0925...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8779974 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8777485 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8777376 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8750369 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း (၄၀) ရပ်ကွက် ရာဇဓီရာဇ်လမ်းမပေါ်ရှိ မြေကွက် အမြန်ရောင်းမည်။ (၄၀*၁၀၀) အကျယ်။ ဂရန်မြေ (အမည်ပေါက်) အရောင်း သိန်း (၂,၂၀၀) B2...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8607140 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္